लाभांश घोषणा गर्दै सानिमा माई हाइड्रोले डाक्याे साधारण सभा, बुकक्लोज कहिले ? - Laganikhabar
लाभांश घोषणा गर्दै सानिमा माई हाइड्रोले डाक्याे साधारण सभा, बुकक्लोज कहिले ?
शुक्रबार, २५ भदौ २०७८, ११ : २९ मा प्रकाशित
लगानी खबर, काठमाडाैँ - सानिमा माई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले लाभांश घोषणा गरेको छ । लाभांशका साथसाथै कम्पनीले दशाैँ वार्षिक साधारण सभा पनि बाेलाएकाे छ ।
कम्पनीको भदाै २४ गते, बिहीबार बसेकाे सञ्चालक समितिकाे बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट कम्पनीका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयाेजनका लागि ०.५२६३ प्रतिशत नगर गरी कूल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने घाेषणा गरेकाे हाे ।
कम्पनीले कार्तिक ११ गते वार्षिक साधारण सभा गर्ने भएकाे छ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनको लागि कम्पनीले असोज १८ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले, असोज १७ गतेसम्म नेप्सेमा काराेबार भइ कायम भएका शेयरधनीले मात्र सभामा भाग लिन र लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।